Kulankii Golaha Wasiirada Somalia oo ku soo gabagboobay magaalada Kismaayo iyo sharciyo lagu ansixiyay!! * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulankii Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya ayaa goor dhow oo barqanimadii ah si rasmi ah uga furmay Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo gudoominaya shirka ayaa sheegay in shirkaan uu yahay mid taariihki ah oo muhiim u ah Shacabka Soomaaliyeed.
“Wasiir walba oo ka tirsan xukuumada ka tirsan inuu la kulmayo Wasiirka dhigiisa ah, si shaqada Qaranka loo dar-dargeliyo. Shirkani wuxuu yahay mid sare loogu qaadayo shaqooyinka ka dhexeeya dawladda Federaalka iyo kuwa maamul gobolleedyada” ayuu yiri raisul Wasaaraha.
Xukuumaddiisa ayuu sheegay raisul wasaaruhu iney xoogga saarayso baahinta maamul wanaagsan oo caddaalad gaarsiiya Shacabka.
somalia:Guardafui Residents in Somalia Say Their Roads Need Urgent Attention